DAREEMKA DIGAAGA EE TAMARTA AH: IIBSASHADA DOORASHOOYINKA WAQTI GO'AN, IYO SIDOO KALE SAWIRRADA IYO TILMAAMAHA FIKRADAHA ASALKA AH EE KU SAABSAN SIDA AAD ADIGU U SAMAYN LAHAYD - BEERAHA DIGAAGA
Sidee loo dhigaa quudin si toos ah digaag ahaan gacmahaaga?
Qaybta qashinka ah ee qoysku waxay qaadataa waqti xadidan, waxaanay muujineysaa baahida loo qabo maalgashiyada lacagta ee milkiilayaasha. Dhibaatada ugu weyn ee qaadata waqti badan oo ka yimaada milkiilayaasha digaagga ayaa ku quudiya. Alaabooyinka ay bixiyaan suuqyada, in kasta oo ay fududahay in la isticmaalo, laakiin waxay leedahay kharash aad u sareysa. Gawaarida la-qabatimay ayaa waxay caawineysaa qofkasta oo kaydiya dhaqaalihiisa.
Mabda'a ah nuujiyaha auto ee leh saacad
DAREEN! Feeders Kuwaas waxaa loogu talagalay oo kaliya in lagu quudiyo quudinta qalalan, taas oo lagu gartey waxqabadka. Waxaa macquul ah in lagu shubo hadhuudhka, granules, calafka isku dhafan ee weelka, laakiin marnaba kari mayso mid kale oo khudrad ama dhul khudaar ah.
Qalabkani wuxuu noqon karaa noocyo kala duwan, laakiin waxay ku saleysan yihiin isla mabda'a hawlgalka.
Waad ku mahadsan tahay shaqada naas-nuujinta, cuntada waxaa la siiyaa digaagga si toos ah., si sax ah mugga ah ee loo isticmaalo shimbiraha. Qaybta kale waxay ku jirtaa qaybta shakhsiga ee farsamada.
Sharaxaada nuujinta baabuurtu ma aha oo keliya hadhuudh joogta ah oo shimbiraha raashin ah, laakiin sidoo kale waxaa laga ilaaliyaa in ay ka soo baxaan kala firdhinta iyo burburinta muddada xilliga roobka. Sidoo kale, qalabkani wuxuu badbaadiyaa cuntada si fiican, sababtoo ah qiyaasta saxda ah.
Feejignaanta waxaa lagu sawiraa quudinta si toos ah, taas oo la baran karo, iyo sidoo kale in la sameeyo saacad. Isticmaalka saacada, waxaa suurtagal ah in la sameeyo wakhtiga quudinta. Mashruuca quudinta waxaa ku yaal xayndaab, qashin lagu dhaqay saxarada. Ku dhowaad dhammaan noocyada qalabka leh ee jadwalku waxay leeyihiin baqshadda iyo kaydinta kaydka loogu talagalay isku darka feed. Xilliga quudinta ayaa suurtagal ah ilaa siddeed jeer, fasaxa u dhaxeeya sidoo kale waa la qabsi karaa.
Qaybta quudinta ayaa si fiican loo ilaaliyaa sababtoo ah daboolka si adag u xiran. Sababtoo ah xaqiiqda ah in saxaaraddu ay tahay mid laga saari karo waa mid aad u fudud in la nadiifiyo. Qalabka ugu weyn ee qalabkan waa qiimo aad u sarreeya.
Dukaamada khaaska ah iyo dukaamada internetka waxaa suurtogal ah in ay iibsadaan aaladaha fudud, tusaale ahaan, bunker, iyo qalabka sare ee tiknoolajiyada oo leh saacad iyo shaqada naaquska.
Kharashka fudud wuxuu u dhexeeyaa shan boqol illaa hal iyo badh kun oo rubuc ah, kan labaadna wuxuu ku kici doonaa shan illaa lix jeer qaali.
Qalabka qalabkani waa ka duwan yahay: laga bilaabo caagada ABS (qiimaha qiyaastii lix iyo badh kun oo roon) iyo birta oo leh caag budo ah (siddeed iyo badh kun oo roon).
Fududeeyaha oo si toos ah u samee gacmahooda laga bilaabo qalab kala duwan. Asal ahaan, qoryaha, tufaaxa ama balaastigga ayaa inta badan la isticmaalaa.
Si aad u sameysid nafsadaada nafaqadaada ah qalabka iyo qalabka soo socda ayaa loo baahan yahay:
loops - 2 pcs;
waxay aragtay qoryo;
A Qalabka soo socda ayaa looga baahan yahay samaynta nuujiyaha bacaha leh gacmahaaga iyo qalabka:
weel caag ah (miisaanka laga bilaabo shan illaa toban litir), halka hawsha qashin-qubka lagu samayn karo baaldi, dhalo ama noocyo kale oo ah weel (sida loo sameeyo quudinta digaagga oo ka baxsan caag 5 litir ah, halkan ka akhri);
mindi aad u fiican;
diyaaradda dhinac ah;
Marka qalabka oo dhan la diyaariyo, waxaad sii wadi kartaa wax soo saarka. Nidaamka waa sida soo socota:
Warqadda xayeysiiska waxaad u baahan tahay inaad sawirto faahfaahinta naqshadeynta. Waxaa jiri doona toddoba ka mid ah:
qaybta hore - laba leydi 28 * 29 sentimitir iyo 7 * 29 sentimitir;
daboolaa - leydiin ah 26 * 29 sentimitir;
derbiyada dhinaca - laba qaybood oo dhererkiisu yahay 40 sentimitir, dhererka sare ee 26 sentimitir iyo geeska hoose ee 29 sentimitir;
hoose - leydi 29 * 17 sentimitir;
derbiga dambe - 41 * 29 sentimitir.
Si taxadar leh u gooyey faahfaahinta.
Marka xigta, samee godad foorno koronto oo loogu talagalay muraayadaha ku yaal qodobbada lifaaqan.
Si aad u sameyso dusha sare ee dusha sare ee loogu talogalay digaagga, sandblast all parts.
Dhiso qaabdhismeedka. Waa in la xusuustaa in darbiga sare iyo gadaasha hore waa in lagu dhajiyaa xajmiga xagasha 15 darajo.
Daboolka ugu sarreeya ee derbiyada dhinacooda.
Daawo fiidiyowga ku saabsan sida loo sameeyo quuddaraha digaaga ee tufaaxa digaagga ee gacmahaaga u gaar ah:
Bilowga waxaa lagama maarmaan ah in la doorto taangiyada si loo kariyo isku darka feedka, iyo sidoo kale qaybta hoose.
Sida saxda ah waxaa suurtagal ah in la isticmaalo dabool leh geesaha ama weel kasta oo geedo sii kordhaya.
Waxaa lagama maarmaan ah in dhexeeyuhu hooseeyo uu ka weyn yahay 20-30 sentimitir, taas oo ka duwan taageraha quudinta.
Marka xigta, waxaad u baahan tahay inaad jarjartid god yar oo wareeg ah oo leh wareega 4-5 sentimitir, qayb kasta, oo leh mindi.
Ka dibna waxaad isticmaashaa muraayadaha si aad isugu xirto labada qaybood ee qaybaha.
Si loo siiyo quudinta si uu u helo goobta saxda ah ee loo baahan yahay iyo si loo hubiyo raaxada ugu badan ee shimbiraha, ciddiyaha iyo wire dheer waa in la isticmaalo. Marka laga hadlayo maqnaanshaha buuxa ee baahida loo qabo, nuujinta shimbiruhu waxay soo baxday mid aad u xoog badan oo deggan, waa ku filan in la geliyo guriga qolka dhulka.
Marka xigta waxaad arki kartaa sawirka., kaas oo soo bandhigaya fikradaha asalka ah ee quudinta self-produced self-sameeyey:
Xitaa haddii cuntada ay ku taal dusha sare, digaagga waxay leeyihiin caado marin ah oo qodaya. Sidaa darteed, waxay cagahooda ku gashadaan cuntooyinka oo kala firdhaan. Akhri qodobbada khubarada ah ee ku saabsan sida loo sameeyo nadaafadda tuubada bulaacada, polypropylene, tuubooyinka balaastikada ah, iyo sidoo kale dhalada 5 litir oo balaastig ah.
Qalabkan oo idil, oo si madax-banaan ama loo iibsado dukaamada, waxaa loogu talagalay in lagu quudiyo shimbiraha marka ay si buuxda u cunaan.
Dhirirka digaaga waxaa waajib ku ah in uu ku daro cunto mar walba xayawaanka xayawaanka ah ee xayawaanka ah ee loo qoondeeyey, taas oo ah, xakamaynta cuntada lagu daro kooxo. Meeshan waa in si adag loo xiraa - tani waxay badbaadin doontaa dhammaan cuntooyinka si dhakhso ah u cunaya shimbiraha oo dhan, gaar ahaan cuncun, tusaale ahaan, digaagaha Andalusiyaanka ee digaagga, waxayna ka hortagi doonaan cuntada inay ku kala baxaan inta u dhaxeysa coop digaaga.
Si shimbir ah oo duufaan ah loola socdo dufanku, waa in aanad marar badan ku dhaafin. Si shimbir shimbir ahi aysan u dhaawacmin oo marwalba xaalad aad u fiican, waa lagama maarmaan in la ilaaliyo cuntadeeda haboon. Ilaa taariikhda Waxaa jira noocyo kala duwan oo digaag ah..
Hilibku wuxuu noqon doonaa mid casri ah oo jilicsan, oo ukumuhu waxay noqon doonaan kuwo caafimaad qaba iyo nafaqo yar yar haddii shimbirku helo cunto habboon oo caafimaad leh. Aad bay muhiim u tahay in la ilaaliyo nafaqada ku habboon shimbiraha. Inkasta oo ay lagama maarmaan tahay dhammaan waqtiga la cuno shimbirta, laakiin weli waxaa jira xaalado marka ay lagama maarmaan tahay in la xadido qiyaasta cuntada ee digaagga. Badanaa, baahida loo qabo nidaamka noocan oo kale ah ayaa soo baxa marka ay ukumo ku jiraan digaagga.
Lama oggola in ay ukumo ku darsato digaagga dhalinyarada, tan iyo shimbirahaasi waxay yeelan karaan dhibaatooyin caafimaad oo halis ah. Haddii digaagga ay dhibaato ka haysato lafaha ama qaabdhismeedkooda, markaa tani waxay muujineysaa in nafaqadeeda ay tahay tayad liidata ama mid la mid ah.
Beeralayda digaaga ee digaaga, quudinta quutul-darrada ah ayaa ah mid caan ah oo jacayl badan muddo dheer. Waxaa fiican inaadan isticmaalin moodooyinka waxsoosaarka qaali ah ee ganacsiyada yaryar, maaddaama laga yaabo in ay noqdaan kuwo aan fiicnayn.
Waa inaysan aheyn mid aan hore u murugoon. Had iyo jeer waa suurtagal in la sameeyo quudin si toos ah shimbirahaaga guriga, tanina waa mid fudud. Markaad naftaada sameysid, waxaa jira laba faa'iido: waxaad ka dhigi kartaa dhadhankaaga, midabkaaga iyo inaad ku qaadato ugu yaraan lacag.